Semalt Expert Inotsanangura Maitiro Aungaita Nekutumira Spam MuGoogle Analytics
Kana ukacherechedza kuti webhusaiti yako inowana zvakawanda zvekutumira motokari uye data inoratidzwa muGoogle Analytics, iwe hausi woga sezvo vanhu vakawanda vakatarisana nechinetso chimwe chete. Nyaya dzekutumira magalimoto ndeyezvakawanda uye dzinofanira kuregwa nokukurumidza nokukurumidza. Nzvimbo itsva yekutsvaga spam inokuvadza data iri muGoogle Analytics kusvika pamwero mukuru. Vanokurudzira havangoparadzi nzvimbo yako yekutsvaga mu tsvakurudzo yekutsvaga zvikamu asiwo vanova nehuwandu hwemashoko avo ega uye mabloggi - dominios de internet baratos. Dambudziko nderokuti mabhizimisi maduku anogona kutarisana nekutumira spam uye kuwedzera kuwanda kwemaonero panzvimbo dzavo.
Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwevateresi Semalt , anopa apa mhinduro inokosha pamusoro pokutumira spam.
Vanokuvadza vanoita spam muGoogle Analytics
Mubvunzo wekutanga unobaya pfungwa dzedu ndewokuti nei vanorwisa nevanokuvadza vachigadzira Google Analytics spam? Vafiti vepaIndaneti uye mablogiki vanochengetedza maGoogle Analytics uye vanochinja zvirongwa zvaro kamwechete kwenguva. Vanobvisa uye vanovhara ma kero e IP anotarisa kusviba uye vari kudzivirira vanhu chaivo kushanya mawebhu enyu. Vakawanda vevashandi vanoshandisa kutumira spam kuti vaite uye vatengesi vatengesi. Kunyanya, vanoishandisa kushandisa kuparadzira majekiseni uye malware uye kuitisa kupesana kwehuwandu hwezuva nezuva. Kana iwe ukaitika kuti uone mamwe mawebhusayithi akangonyanya mukutumira dhesi yako, haufaniri kudarika iyo site uye uibvise kubva paGoogle Analytics nokukurumidza..
Kutumira spam kunoitika sei?
Nokufamba kwenguva, Google yakatanga zvinhu zvakawanda uye maitiro ekuvimbisa kuchengetedzwa nekuchengeteka kwewebsite yako. Iwe unogona kushandisa zvayo uye zvingasarudza kuchengetedza nzvimbo yako yakachengetedzwa kubva kune hackers. Kuchengetedza kunogona kuitwa nenhamba dzakasiyana-siyana dzezvinhu zvose. Imwe nzvimbo inoreva kuti iwe unogona kushandisa imwe nhamba yefaira kana kuti kodeti iyo kuti ufungisise kana iwebsite yako iri kuwana mvumo yakarurama kana kwete.
Google Analytics inobvumira vashandisi vayo kushandisa kusvika kune makumi mashanu dzimba imwe neimwe. Zvinoreva kana iwe uine AdSense, iwe unofanirwa kuwana imwe nhamba ye serieri pane imwe nzvimbo. Nhamba yeUA, iyo inoreva Urchin Analytics, ndiro zita rechigadzirwa cheGoogle chave chawana kwemakore nekuda kwevashandisi varo. Nhamba yaro yepakati ndiyo nhamba chaiyo yekambani yaunofanira kushandisa paunenge uumba pfuma. Zvose zvezvivako mune imwe nhoroondo yeGoogle Analytics inogona kugovera nhamba yakafanana.
Uyezve, Google Analytics inotipa mafungiro ekutsvaga. Zvakananga kugadzira mafaira uye kuvandudza zvirongwa zveAlextic maererano nemaitiro matsva nemaitiro. Zvinyorwa zvakawanda zvekutungamira uye zvidzidzo zvinowanika paIndaneti yekubvisa kushandurwa kwepamu. Iwe unogona kuchengetedza huwandu hwehu data yako muGoogle Analytics nekugadzirisa zvirongwa.